Matte Black jiido Down Jikada qasabad
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Soodhadhka Qulqulka / WOWOW Matte Black Pull-Down spray Mashiinka Jikada
qiimeeyay 4.80 out of 5 ku salaysan 20 ratings macaamiisha
Tubada Matte Madow ee jikada madow leh tayo aad u fiican
WOWOW waxay leedahay khibrad warshadeed markay samayso saaxiibka ugu fiican ee hoos udhaca tuubooyinka jikada ilaa 2008. Shaki la'aan khibradani waxay si fiican ugu xusan tahay shaqada iyo qaabeynta tubada jikada ee WOWOW. Khibradaas ka dhalaneysa awgeed waxaa lagugu hubiyaa inaad haysato tubbada ugu fiican ee jikadaada, oo loogu talagalay hawl-karnimada ugu dambaysa iyo ugu dambeyn naqshad gaar ah. Sababtaas darteed, qulqulkaan aadka u sarreeya ee qulqulaya qolka jikada ee WOWOW ayaa ah doorashada ugu fiican marka aad naqshadayneyso ama aad dib u qaabaynayso jikadaada.
WOWOW Jiidida Qubayska jikada 2310700B
Jikada waxaa laga yaabaa inay tahay booska gurigaaga oo aad waqtigaaga intiisa badan ku qaadato. Kaliya maahan jikada meesha aad ku diyaarsato cuntadaada. Intaa waxaa sii dheer, dad badan ayaa noloshoodu xuddun u ahayd jikada. Ka fikir tusaale jikada wax lagu cuno oo leh miis weyn oo wax lagu cuno oo ku xigta halka cuntada lagu sameeyo. Nooc kasta oo nooca jikada ah ee aad haysato, naqshadeynta iyo shaqeynta ayaa ah labada dhinac ee ugu muhiimsan. Markaad qorshaynaysid ama aad naqshadaynaysid jikadaada riyada, waxaad dooneysaa inaad sameyso aragti ballaaran. Xulashada qasabadda jikada sidaas darteed waa mid aad muhiim u ah. In kasta oo qasabada jikada ay yartahay, hadana waa qodobada dabiiciga ah ee jikada kasta. Aragga dadku si dabiici ah ayuu u soo jiitaa qasabadda jikada. Sidaa darteed waxaad hubaal ka dhigi doontaa aragti ah WOWOW's arc matte madow oo hoos u dhigaya qasabada jikada! WOWOW matte madow oo hoos u dhigaya qasabada jikada ayaa bixisa tayo sare oo hoos u dhig qasabada jikada oo leh qaab aad u fiican qiime aad u hooseeya. Sidaa awgeed matte-kan madow ayaa hoos u dhigaya qasabadda jikada ayaa ku siineysa saamiga ugu fiican ee qiime-wax-qabad ee aad suuqa ka heli doonto
Naqshad qurxan ayaa hoos u dhigaysa tubada qolka jikada ee madowga madow
WOWOW's arc matte black jiidista qasabada qolka jikada waxaa lagu soo qaatay naqshad heer ahaan u qaabaysan oo dib loo cusbooneysiiyay faahfaahinta qaabka casriga ah. Sababtaas awgeed, tubbada qolka jikada waxay ku dari doontaa taabasho xarrago u eg qolka jikada. Sida iska cad waa inaad si fiican u xulataa tubada jikadaada. Qaabka ay u sameysaneyso hal mid iswaafaqsan oo la mid ah inta ka harsan naqshadeynta jikadaada. Faa'iidada matte-kaan madoow ee jiifa tubada jikada ayaa ah in lagu dari karo naqshadaha dhaqanka, iyo sidoo kale naqshadaha jikada ee casriga ah. Sikastaba ha noqotee, matoorka madow ee WOWOW hoos udhaca tuubada jikada ayaa dammaanad qaadi doonta taabasho aad u wanaagsan oo ku dhawaad ​​jikada kasta. Kaliya kaliya maahan gooseneck matte musqulaha jikada madow ee madow waxay ku siin karaan naqshad yar. Fududeed waa mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee qasabadda jikada. Si kastaba ha noqotee, waxay bixisaa sidoo kale bayaan naqshad riwaayadeed leh oo leh midab u gaar ah iyo isbarbardhiga qaababka. Si aad u noqoto qof daacad ah, WOWOW waxaan u aragnaa matte madoow hoos udhaca tubada jikada gabal farshaxan ah! Waxaan hubnaa markii aad ku isticmaasho tubadan jikada jikadaada jikadaada inay taasi keenayso jawaab celin badan oo soo booqdayaashaada.
Mate madow soo jiid tuubbo leh waxqabadka ugu badan ee jikadaada
Naqshadeynta ayaa ah mid, laakiin waxaa kaloo muhiim ah shaqeynta tubada jikada. Markaad jikadaada kujirto ADesign waa mid, laakiin waxaa kaloo muhiim ah shaqeynta tubada jikada. Markaad jikadaada joogto maalinwalba, diyaarinaysa abuuritaanno cajiib ah, waxaad rabtaa inay ku caawiso inta aad cuntada diyaarinayso iyo nadiifinta ka dib. Natiijo ahaan, waa inaad doorataa tubada jikada ee taageerta rabitaankaaga ku saabsan dhammaan noocyada howlaha jikada. WOWOW's arc matte black jiitada qolka jikada waxaa loogu talagalay inay ku siiso waxqabadka ugu badan. Maaha wax aan micno lahayn, matte madow jiidida tubada jikada ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu shaqeeya jiidaha tubooyinka jikada ee suuqa. Qaybta-hoos u soo dhacday ee qashin-qolka jikada madoow ee madoow waa mid si gaar ah u shaqeynaya. Marka ugu horeysa, waxaad si sahal ah iskaga saari kartaa madaxa wax isweydaarsada si aad u nadiifiso dhamaan qaybaha jikada jikadaada. Ka dib marka la isticmaalo madaxa jiidida, waxay si habsami leh dib ugu laaban doontaa booskeedii asalka ahaa. Ka sokow waxaad si raaxo leh ugu dhex beddelan kartaa jilicsanaanta iyo buufinta adag marka loo eego hawsha jikadaada. Adareeska wareejinta ee matte madow jiidista tubada jikada ayaa ugu dambeyntii ku siin doonta dabacsanaan aad u baahan tahay.
Matteega birta ah ee madowga ah jiidista tubada jikada
Muuqaalka madoow ee WOWOW ee jiqda jikada wuxuu ka samaysan yahay bir koranta iyo agabyo kale oo tayo sare leh. Qashin-ka-soo-goyntiisa jikada ma aha oo keliya xoq u adkaysta laakiin sidoo kale miridhku adkaysi u leeyahay oo adkaysi u leh. Sidaa darteed waa fududahay in la nadiifiyo. Gogoldhaaf fudud ayaa baabi'in doonta hadhaaga macdanta iyo laambarka ku dul dhisma madaxa silicone. Qolka jikada jikada lafteeda way fududahay in la nadiifiyo sidoo kale wasakhdu kuma xirnaato. Nadiifinta joogtada ah ee tubada jikada madow ee matte madow waxay kuu dammaanad qaadi doontaa adkeysi cimri dheer. Qulqulka sare ee arc matte madow wuxuu jiidayaa tubada jikada ee WOWOW waa mid aad u fudud in la rakibo wuxuuna la imaanayaa tilmaamo rakibayaal cad. Maaddaama ay maamusho 90 digrii hore oo is-wareejin ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku rakibto tuubadan jikada madow jikada meelaha adag, iyada oo aan loo baahnayn nadiifinta miiskaha. Naqshadeeyayaasha WOWOW ayaa markaa ka fikiray ku dhawaad ​​wax kasta oo naqshadeeya matte-ka madow ee jiifa qasabada jikada. Sidaa darteed WOWOW kama baqeyso inay ku siiso dammaanad seddex sano ah oo ku saabsan lammaaneheeda madow ee jiidaya tubada jikada. Waxaan hubnaa tayada badeecadaheena waxaanna dammaanad ka qaadaynaa in aad raaxadaada ugu badan heli doonto oo badeecaddeenu ay sameyn doonaan inta ugu badan. Marka sabab kasta ha noqotee tuubada kushiinka ayaa u shaqeyn waaya waxaad naga fileyso, waxaan kuu beddeli doonnaa sheyga adiga oo aan wax kharash ah kaaga bixin adiga. Ugu dambeyntii, waxaan bixinaa siyaasad soo celinta oo ah 90-maalmood oo bilaash ah haddii ay dhacdo in qasabada matte madow madoow aysan noqon waxa aad ka fileysay. Sidaad u aragto, waxaan aaminsanahay lammaanaheenna madoow garaaca tubada jikada. Sidaas awgeed waxaan filan karnaa oo keliya inaad 100% ku qanacsan tahay!
Faa'iidooyinka WOWOW saqafka sare ee madow ayaa hoos udhaca tuubada jikada si xawli ah:
Waxay soo bandhigaysaa waxqabadka ugu wanaagsan ee ku habboon baahiyahaaga
Waxay isku daraysaa esthetics oo leh waxqabad sare
Dammaanad 3-sano ah oo ku saabsan arc-kaan qaaliga ah ee madow wuxuu jiidayaa tubada jikada
SKU: 2310700B Categories: Qubeyska jikada, Soodhadhka Qulqulka Tags: Arc sareeya, Matte Black, Hoos u jiid
Ninkaygu waa qandaraasle tuubbo sameeye ah oo aad u door bidaya qasabadaha aan ku haysanno guriga. Tan waxaa loogu talagalay RV-keena aan ku noolaan doonno muddo hal sano ah inta aan dhiseyno gurigeenna cusub, sidaas darteed ma dooneynin inaan ku bixinno $ 200 + oo ah muuqaal quruxsan oo madow oo ka muuqda bakhaarkayaga hagaajinta guryaha. Aniga oo og in aan soo celin karo hadaan necbahay oo ay qashin ahayd, waxaan qaatay fursad nasiib ah oo waxaan ku iibsaday tan digniinta ninkayga ee ku saabsan “qasabadaha raqiiska ah” anaguna labadeenaba waan jecel nahay! Cabirka iyo cabirka ayaa kufiican RV waana jecel nahay culeyska culus ee saaran culeyska kujira buufinta. Ninkaygu wuu rakibay isagoon wax dhib ah qabin labadeenaba waxaan si layaableh ulayaabanay tayada wanaagsan ee buufinta, badhamada rogrogmada ka wareejinta buufinta ilaa durdurka iyo xitaa badhanka joogsiga socodka ee madaxa buufinta (aad ugu habboon), xakamaynta shidata iyo daarka iyo hawlkarnimada madow ee matte adag. Kaliya jeclow oo waxay ahayd qiimo weyn !! Kugula talin lahaa!
Waxaan tan ku dalbaday in lagu beddelo tuubbada qoorta goose ee qulqulaysa qolkeenna adeegga. Waxaan dooneynay mid hoos u soo jiidaya biiyaha laakiin ma dooneynin inaan ku bixino wax ka badan $ 100 mid ka mid ah oo aan ka eegeynay dukaamada waaweyn. Midkaan ayuu arkay wuxuuna go'aansaday inuu isku dayo.
Waxay ahayd wax aad u fudud in la rakibo. Dhammaan iskuxirayaasha ayaa lagu soo daray marka laga reebo inaan u baahday mid ka duwan sabatoo ah shidmaada dabka / dabka. Wax kasta oo kale waa la bixiyay oo aad u fudud si loo rakibo. Tilmaamaha ayaa ku jiray calaamadda. Waxaan aqriyay in kuwa kale ay dhibaato ku qabaan kuleylka / qabowga inuu gadaal uga noqdo caadi. Kaliya isku soo xir khadadkaaga kulul / qabow ee ka soo horjeedka ah iskana dhegayso qoraalka koontaroolka dabka iyo deminta maadaama aadan arki karin illaa aad dhinac ka eegto mooyee. Markaa waxaad uheleysaa xakameyn sida caadiga ah.
Durdurku waa mid weyn oo xoogaa xoog ah ayuu ku leeyahay. Jeclow buufiska oo hoos u soo rog mashiinka si digsiyada waaweyn iyo dheriyada maraq ee waaweyn loo dhaqo loona mayro aad u fudud. Wey fiicantahay in lagu mayrto weelkeena weyn ee qoto dheer. Guud ahaan aad ayaan ugu faraxsanahay qasabadani. Dammaanadda 5-ta sano waa weyn tahay sidoo kale. Waxaan kula talin lahaa badeecadan dadka aan ogahay. Wax soo saarka weyn.
Waxaan u soo iibsanay dib u habeyntii jikada waxaanan dooneynay inaan la baxno muuqaalka xatooyada birta ah iyo qaanadahayadu waa faahfaahinta lafdhabarta mugdiga espresso. Marka tani waxay udub dhexaad u ahayd jikadayada. Rakibaaddu way fududahay, ninkaygu wuxuu rakibay illaa 45 daqiiqo. Waxay u badan tahay inaanu waqti badan ka qaadan lahayn laakiin saxankayagii hore iyo qasabaddii aanu xanuunku kaga bixi lahayn. Waxay leedahay xoog fiican markii. toogashada biyaha iyo burooyinka way fududahay in lagu hagaajiyo biyaha kulul iyo kuwa qabow kaliya waxaan jeclaan lahaa inay waxyar ka weynaadaan. Hoos u jiidka sidoo kale si fudud ayuu dib ugu noqdaa. looma baahna in dib gacanta loogu riixo. Dhamaadku wuxuu umuuqdaa mid aad u fiican, mana ahan mid jaban. La soco sawirada la cusbooneysiiyay markii jikada la dhammeeyo.
Waan jeclahay jacaylka jacaylka qasabaddan! Waxay ahayd wax fudud fudud in la rakibo, kaliya waxay qaadatay 5 daqiiqo markii aan ka saaray qasabaddii hore. Qaybta ugu adag ee rakibidda waa ka saarida tii hore. Tilmaamaha ayaa cad, waxaan jeclaa inay leedahay sawir talaabo kasta. Jikadeyda isla markiiba waa la casriyeeyay aadna waan ugu faraxsanahay iibsigan! Waxay ahayd mid aad loo awoodi karo, waxay umuuqataa mid tayo leh, waan jeclahay dhameystirka matte-ka. Iska jir, faraha ayaa si muuqata u muuqda laakiin si fudud ayaa loo tirtiraa. Waxay uyimid baakad wanaagsan oo kahoreysa sidii lafilaayay. Wax diidmo ah oo aan ka sheego sheygan, hore ayaan ugula taliyay laba qof oo kale oo labaduba waa iibsadeen. Waxaan rabay inaan sawiro dhajiyo laakiin waxay umuuqataa taasi inaan loo ogoleyn dib u eegista. Aad u xun maxaa yeelay waxay umuuqataa wax weyn!
Ahaanshaha qof dumar ah, tani waxay ahayd sida ugu fudud ee ay hesho. Wax qalab ah looma baahnayn marka laga reebo khariidad taasna waxay ahayd in la adkeeyo balka qadka.
Aakhirkii waanu badalnay qasabadii jikada. Muddo badan baan raadinayay oo waxaan la kulmay quruxdan. Qiimaha jaban ayaa iga dhigay mid ka labalabeeya laakiin dib u eegista ayaa sii xoojisay go'aankeyga iibsiga. Dib u eegistuna waa sax. Tuubada waa isbedel qurux badan jikadayada waxaana ka buuxa astaamo fiican. Jecel buufinka hoos u soo jiida iyo awoodda aad ugu beddeli karto rusheeyaha. Rakibaadda waxay ahayd mid si fudud u fududahay wax dhibaato ahna maanaan qabin Runtii waxay u baahan yihiin laba qof inay ka saaraan qasabaddii hore oo ay ku rakibaan wax cusub. Ka dhigayaa rakibidda mid fudud. Tuubada ayaa sifiican u timid sanduuq dhammaan qaybaha waa lagu daray. Waa iibsi cabsi badan! Khalad kuma noqon karo dammaanad 5 sano ah. Fiiri sawirada, kahor iyo kadib. Farqiga noocan ah ee quruxda badan !!!!
Waxaan suuqa ugu jiray qasabad cusub maadaama ay miinadu bilaabatay inay ku daadato saldhigga. Waxaan booqday Lowes iyo Home Depot labadaba taasina waxay ii noqotay waqti lumis. Waxaan go'aamiyay waxa barta qiimahaygu ahaa iyo kuwa ku jira xadkaas oo u muuqday oo aan u dareemay qasabado qashinka lagu rido oo chromed ah, oo la mid ah wixii aan beddelayay. Waan ka taxaddaray dhammaan 5ta xiddigood ee dib u eegista ah ee Amazon, si kastaba ha ahaatee waxaan qaatay go'aanka ah inaan jiido kicinta iyada oo ku saleysan waxa dareemay sida dib u eegista daacadda ah. Nasiib wanaagse, markii aan kormeeray qasabadda, waxaan ogaa inaan sameeyay xulasho sax ah.
Ficil ahaan, waxay leedahay wax walba oo aan raadinayay qasabad bedel ah. Ma aanan hubin sida ay u ekaanayso midab madow, laakiin aad baan ugu faraxsanahay in aan idhaahdo, way ku fiicantahay saxankayga lacagta. Tuubada iyo dhamaan qalabyada la socda waxay leeyihiin dareen tayo leh. Anigu ma ihi tuubiste, hase yeeshe dhib kuma qabin inaan rakibo tuubada kaligay. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigeyga qof walbana waan kula talin lahaa.
Waxaan dhigay qasabadani qiyaastii 2 todobaad kahor, ilaa iyo hadana wax dhibaato ah malahan waana ay shaqeysay si weyn. Sidoo kale waxay u egtahay mid fiican. Rakibaadda waxay ahayd mid aad u fudud. Biyo aad ufiican oo kafiican Delta duug ah oo ay bedeshay. Waxay u egtahay tayo wanaagsan. Waxay ku leedahay leexashada midig madaxa buufinta taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud xagal ugu wareejiso buufinta. Wuxuu si fiican ugu soo xirmay xumbo qaro weyn si looga hortago waxyeelada maraakiibta. Aad loogu taliyay.
Tayo weyn, dhammeyn qurux badan, si fudud loo rakibo… feker badan iyo injineernimo ayaa cunuggaan galay. Si aad ah ugu talinaynaa! Muuqaal aad u qurux badan oo casri ah. Kaliya qofkasta oo la kulma miisaanka buufiska oo garaacaya tuubbada hoosta hoosteeda markii aad hoos u dhigaysid buufis… hel xaashi shey adag… Waxaan isticmaalay nooc caag ah oo loo yaqaan .. Qaab, Waxaan u isticmaalay feer dalool ah qalabkii hore ee wiilkeyga waxaanan ka sameeyay dhowr dalool oo u dhigma hal inji oo inji ah .. xirmooyin la istcimaalay oo sariirta lagu xardhay… laba god oo ka samaysan koorta si aan ugu sugo sariirta meertada. biibiile iyo whalaa, culeyska ayaa marba marka ka dambeysa kor iyo hoos u riixaya shaatiga / koonta meesha lagu dhejiyo… mar dambe kuma garaacayo culeyska tuubada dheecaanka… si weyn ayuu u shaqeeyaa… waxtar wax ku ool ah oo wax ku ool ah ka bixiya dhibaatadaas. Mar labaad, qasabadani waa mid layaableh yo .ma niyad jabi doontid.
Waxaan u soo iibsaday qasabadani sidii qasab ku-meel-gaadh ah markii uu kii hore iga jabay, anigoo filaya inaan beddelo markii aan bilaabayno dib u habeynta jikadayada xilliga dayrta. Aad ayaan ugu faraxsanahay waana la joogi doonaa! Ninkaygu si fudud ayuu u rakibey waxayna u egtahay mid qaali ah. Nidaamka soo jiidaya buufiska dib looga noqon karo wuxuu u baahan yahay in aan laga hor istaagin saxankaaga hoostiisa haddii kale waxaad la yeelan doontaa arrimo la xiriira dib ugu noqoshada meeshii. Haddii aad hubiso inay cadahay in la guurayo, ma jiraan wax arrimo ah oo si buuxda ayuu u shaqeeyaa. Wiilkaygu wuxuu samaynayaa dib-u-habeyn runtiina wuu jeclaa kuweenna sidaa darteed mid ka mid ah ayaan u iibsaday isaga. Waxaan sidoo kale heli doonaa mid kale markaan sameyno dib u habeynteenna saxanka qashinka, maxaa yeelay midkaan lama bedelayo! Jeclahay!
Waxaan tan iibsaday ka dib markii aan ka hubiyay bakhaarada waaweyn ee Box-ka tuubbo oo aan ogaaday inaanan rabin inaan bixiyo lacag aad u sarreysa oo qasabadda ah. Waxaan si farxad leh ula yaabay tayada sheygan markii uu yimid. Waxay ku jirtay baakado la mid ah tubooyinka waaweyn ee caanka ah. Waa adag, si fiican loo sameeyey. Runtii waan jeclahay muuqaalkiisa waana mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxay leedahay qaar ka mid ah muuqaalada quruxsan qabow; badhanka dabka iyo kan dabka ee buufinta iyo xulashooyinka nooca buufinta badan. Waxaan kugula talin lahaa tan qofkasta oo raadinaya inuu badalo tuubada raadineysa dareemo iyo tayo sare. Rakibaadda waxay ahayd mid dhakhso badan oo aad u fudud.
Bilaabida dib u dhiska guri cusub kahor guuritaanka iyo mid ka mid ah shaqooyinka ugu horeeya waa miis ay ku jiraan qalabka jikada cusub. Dukaamada waaweyn ee sanduuqa ayaa runtii iga baqay iyaga oo wata jadwalkooda qiimaha badan. Waxaan bilaabay inaan fiiriyo tagitaankeyga dukaanka weyn ee sanduuqa dib u soo celinta - amazon waxaana helay xulasho qiimo jaban oo aad ufiican. Tuubadaani waxay dareemeysaa runtii inay dhisan tahay. Dhamaadka cowsku wuu fiicanyahay mana muujinayo faro. Waa culus yahay sidaa darteedna wuxuu dareemayaa adkeyn iyo adkeyn. Qaybta kaliya ee balaastigga ah ee dul saaran waa guryaha biiyaha ee dhamaadka tuubada. Wuxuu la yimaadaa tilmaamo iyo dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah. Sawir ku cusbooneysiin doonaa marka dusha miiska la saaro.
Alaabtaani waa mid cabsi badan! Waxaan ku rakibey dhammaadka usbuuca jikadayada - qasabaddeenii hore ee tobannaan sano ka hor loo baahnaa in si xun loo beddelo. Inta badan jikadayada ayaa si weyn loo cusbooneysiiyay, marka laga reebo saxanka. Waxay ahayd wax yar oo farsamo ah sababtoo ah meesha aan ku quusto ee isku dayaysa inaan wax walba ku dhejiyo, laakiin wax walba oo si fudud ugu xiran tuubada lafteeda waxayna u shaqeysaa sidii ay ahayd. Waxaan jecelahay awooda aan si fudud ugu kala beddeli karo socodka biyaha joogtada ah iyo buufiyaha - ma jiro tuubbo u gooni ah buufiyaha! Qasabadda qasabadu waxay umuuqataa mid aad ufiican jikadayada - waxaan leenahay dusha sare ee miisaska madow leh gadaal madow. Waxay u dhigantaa si dhammaystiran!
Tuubada ilaa iyo hada waa mid u qalanta kharashka. Way adagtahay in la helo qasab madow oo aan qaali ahayn. Way fududahay in la rakibo. Waxaan la galay arin la xiriirta qeybta hoose ee boorarka maxaa yeelay miiqyadu isma waafaqsana laakiin adeegga macmiilku aad buu u fiicnaa wuxuuna ii soo diray mid cusub. Way fiicnaayeen inay la shaqeeyaan. Waxaan kalsooni ku qabaa inay sii wadi doonaan caawinta haddii wax qaldamaan.
Waxa kaliya ee aan ku qabsado qasabadani waa markii aad gasho qaabka buufin oo aad biyaha damiso, dib uguma soo noqdo qaab caadi ah. Maahan dhamaadka adduunka tan iyo markii Ive ay caadeysatay rogista gadaal kahor intaan biyaha la xirin laakiin tani waxay ka careysiin kartaa qaar.
Fadlan fadlan iibsiga qasabada jikada. Waxaan hadda jikadayda dib u cusbooneysiiyay, qasabadani waxay ku habboon tahay jikada casriga ah. Waxay umuuqataa oo dareemeysaa wax weyn, waxay ushaqeeysaa sifiican, waana jeclahay muuqaalka hoos udhaca. Tuubbo gaar ah oo ah midab madow oo midabkeedu yahay, oo leh tuubada buufinaysa La dhacay tayada, iyo shaqo ahaan. Waxay la timid fudeyd la raaco tilmaamaha, iyo tilmaamo faahfaahsan iyo taageero shirkadda. Qiimo weyn qiimaha.
Waxaan ku iibsaday tan madow si aan ugu dhigmo saxankeyga granite-ka madow. Waxay umuuqataa mid fiican. Waxqabadka & muuqaalku waxay helayaan 5 xiddigood. Sababta aan u siiyay kaliya afar si kastaba ha ahaatee, waa marka la isticmaalayo buufinta, biyuhu way socdaan MID KASTA meesha… & Waxaan ula jeedaa meel walba. Ka dib toddobaadyo yar oo aad tirtirayso biyaha, dhowr jeer oo yaryar oo bir ah oo aan lahayn ayaa ka muuqda dhammaadka.
Rakibaadda fudud iyo tuubada ayaa umuuqata inay tahay mid tayo sare leh. Waxa kaliya ee aan ka sheekaynayaa waa madaxa oo ah caag oo aan bir ahayn. Rajeynaya inay sii hayn doonto muddada dheer. Si fiican u baakadeysan oo sidaas oo kale ah waxaa jira dammaanad 5 sano ah. Qiimo weyn guud ahaan qiimaha yar!
Waan jeclahay qasabaddayda cusub! Waxay u shaqeysaa si weyn illaa iyo hadda. Haduu lahaa tuubbo xirfadle ah inuu rakibo si loo hubiyo in si sax ah loo rakibay. Rajaynaynaa inay sii socon doonto waqti aad u dheer. Wax ka beddeli doonaa haddii ay bilaabato daadinta ama gariirka.
Ku dhowaad si buuxda u soo ururay. Isku xidhka biyuhu waxay ahaayeen kuwo tayo fiican leh, qasabadu waxay umuuqataa inay sifiican ushaqeyneyso Waxaanan ku faraxsanahay boorsada yar ee qalabka dayactirka (sida cinjirka o iyo wixii lamid ah) ee lasocday.
waxaan cusbooneysiinayaa dib-u-eegiddaydii hore. Rinjiga madow wuxuu bilaabay inuu ka soo baxo salka wax ka yar 6 bilood, laakiin shirkadu waxay bedeshay tuubada ku jirta damaanad. Waxaan jecel nahay waxqabadka iyo qaabka tuubada.
La iibiyey: 20